Waraana Afgaanistaan: Gareen Taalibaan Tiraampi waliin mari'achuu ni barbaanna jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Waraana Afgaanistaan: Gareen Taalibaan Tiraampi waliin mari'achuu ni barbaanna jedhan
Gareen Taalibaan Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraamp fedhii qabu yoo ta'e mariidhaaf ''balballi keenya banaadha'' jedhan.
Biyyoota lameen gidduutti araara buusuuf jaarsummaadhaan gidduu kan turan qondaalli gameessi Sher Mohammad Abbas Stanikzai yaada addatti BBC'f kennaniin daandiin nageenyatti nu baasu mariidhaan qofa jedhan.
Kanaafuu Ameerikaan yoo Afgaanistaan waliin nageenya buusuu barbaadde nuti mariidhaaf qophiidha jedhan.
Obbo Stanikzai yaada kan kennan erga pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi ''mariin araaraa du'eera'' jechuun yaada kennaniin torban tokko booda.
Tiraampi marii nagaa Afgaanistaan waliinii haqan
'Wal hammanneerra, garuu ammallee ajjeesuuni nan danda'a'
Jalqaba ji'a kanaarratti biyyoonni lameen walii galtee isa dhumaa waraana waggaa 18f ture goolabsiisa jedhamee abdatamerra ga'uuf turan.
Inumaa Obbo Tiraampi Pirezidaantii Afgaanistaan Ashraf Gani dabalatee aanga'oota gameeyyii biyyattii waliin mari'achuuf Fulbaana 8 Camp David keessatti affeeranii turan.
Garuu haleellaa gaafa Fulbaana 6 magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul keessatti raawwateen lotuun Ameerkaa gameessi ajjeefamuun akka Tiraampi yaada isaanii jijjiiran dirqamsiiseera.
Gareen Taalibaan wayituma mariitti jirrullee waraana dhaabuu kan hin dandeenye ''Marii karaa nagaa mari'achuuf hamilee kan qabuu miti'' jedhan Obbo Tiraampi.
Obbo Stanikzai yaada Ameerkaa kana morman, gareen Taalibaan homaa hin balleessan jechuun BBCtti himan.
''Isaan nama Taalibaan hedduu ajjeesan. Loltuun isaanii tokkichi waan du'eef miira akkanaa agarsiisuun sirrii miti. Waan namni tokkichi duraa du'eef waraanni hamaan hin dhaabbanne jechuun sirrii miti.'' jedhan.
"Gama keenyaan mariidhaaf balballi keenya banaadha. Kanaaf gareen warra Ameerkaas irra deebi'anii ilaaluun murtee isaanii ni jijjiiru jennee yaadna.''
Maalirratti walii galuuf turan?
Walii galteen kun guutummaatti adda ba'ee hin teenye.
Garuu Ameerkaan torban 20 keessatti loltoota ishee 5,400 baasuun walii galtee isa jalqabaa ture.
Yoo Ameerkaan loltoota hagana baaste Afgaanistaan ammoo shororkeessitootaaf da'oo akka hin taane waadaa seenuuf turte.
Obbo Stanikzai akka BBCtti himanitti nageenyi loltoota biyya alaa dhufanii fi loltoota Taalibaan gidduutti bu'uu kan danda'u yoo walii galteen kun mallattaa'e qofadha jedhan.
Kana ta'uu baannaan humnoota hidhattoota Taalibaan fi kaan gidduutti nageenyi waaraa hin argamu jedhan.
Erga bara 2011 Ameerkaan Afgaanistaan weeraruun loltoota ishee heddumminaan galchitee inumaa bakkeewwan hedduu kan to'atan gareen hidhattoota Taalibaan bulchiinsa Pirezidaanti Ashraf Gani'f beekamtii hin kennine.
Hanga walii galteen Ameerkaa waliin mallattaa'utti bulchiinsa amma Afgaanistaan keessatti aangoorra jiru waliin homaa dubbachuu akka hin feenu ibsaniiru gareen kun.
Buufanni waraanaa Kaabul Haleelame
Ameerikaan Afgaanistaanitti $ biiliyoona 700 ol baafte
Obbo Stanikzai akka jedhanittimmoo garee Afgaanistaan gidduutti mariin gaafa Fulbaana 23 eegale waliigalteedhaan yoo xumurame dhimmi ijoon jalqabaa araara buusuudha jedhan.
Gareen Taalibaan dhimma nageenya buusuu kanarratti Raashiyaa fi Chaayinaan akka keessa seenanillee waliin hojjetaa jira jedhan.
Gama biraatiin gorsaan dhimma nageenyaa Afgaanistaan Dr Hamdullah Mohibt nageenyi Afgaanistaan keessatti bu'uu kan danda'u yoo mootummaa waliin mari'atame qofadha jedhan.
''Biyyoota ollaa keenyaa kanneen hidhattoota Taalibaan gargaaran waliinillee mariin ni barbaachisa. Qaama hunda waliin mari'achuutu furmaata ta'a jedhan.''
Haala nageenyaa Afgaanistaan yeroo ammaa
Ragaan BBCn argate akka mul'isutti Afgaanistaan keessatti guyyaa guyyaan giddu galeessaan namoonni 74 ni ajjeefamu.
Qaamni waliin dubbatee rakkoo furu waan hin jirreef haleellaan guyyuu hammaataadhuma deema.
Kaleessa haleellaa boombiitiin namoonni 48 ajjeefamaniiru.
Namoota ajjeefaman keessa daa'immanii fi namoonni humna hin qabne jiru jedhan ogeeyyiin Fayyaa.
Haleellaa kanas hidhattoota Taalibaantu raawwatan jedhameera.
Goodayyaa suuraa Nama haleellaa boombiitiin miidhaan irra ga'e
Obbo Stanikzai lubbuu lammiilee guyyaa guyyaadhaan badaa jiruuf humnoota alaa komatu.
Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii lammiileen Afgaanistaan hedduun kan ajjeefamaa jiran loltoota Ameerkaa fi Afgaanistaaniin akka ta'e ibsuu isaas eeraniiru.
Gareen hidhattoota Taalibaan daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabneef gaachana ta'a malee itti roorrisee hin beeku jedhan.
Dhoo'insa Kaabul: Misirroon Afgaan dhoo'insaan booda 'abdii kuteera'
Ameerikaan Waraana Afgaanistaaniif $ biiliyoona 700 ol baafte